तरकारीमा विषादीय प्रयोगको समस्या विकराल बन्दै, कतै तपाइकाे भान्सामा विषादी पाकिरहेको त छैन ? | Suvadin !
तरकारीमा विषादीय प्रयोगको समस्या विकराल बन्दै, कतै तपाइकाे भान्सामा विषादी पाकिरहेको त छैन ?
यो अवधिमा धेरै नेपालीको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी पाक्ने कुराले उनी चिन्तित छन्।
काठमाडाैं, जेठ ६ - तरकारीमा विषादीय प्रयोगको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। किसानहरुले प्राविधिकको सल्लाह नलिइ जथाभावी विषादीको प्रयोग गर्दा काठमाडौंबासीको भान्सामा विषादी पाकिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका आसपास र तराईका जिल्लाबाट भित्रिन तरकारीको परीक्षण हुन नसक्दा विषादीसमेत मानिसको पेटमा पुगिरहेको छ। सरकारका नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा विषादी र तरकारी एकैचोटी पाकिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा बेचिने अधिकांश तरकारीको परीक्षण नै हुँदैन । दैनिक ३० ट्रक भन्दा धेरै तरकारी बिक्री हुने स्थानमै सबै तरकारीको विषादी परीक्षण नै गरिन्‍न। यो कथा देशकै सबैभन्दा ठूलो कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार हो ।
सकियो कीट कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा दैनिक ५० भन्दा बढी प्रकारका तरकारीको कारोबार हुन्छ। सबै तरकारीको विषादी परीक्षण गरिँदैन। विषादी परीक्षण नहुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा दैनिक पाँच तरकारीको विषादी परीक्षण भइरहेको छ। विषादी परीक्षण गर्ने कीट नहुँदा सबै तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न नसकिएको विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ कालीमाटी नायव प्राविधिक सहायक जागेश्वर शर्माले बताए ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा मंगलबारदेखि विषादी परीक्षण कीट सकिने शर्माले बताए। कीट सकिएपछि बजारमा बिनापरीक्षण तरकारी जाने उनले बताए। यो अवधिमा धेरै नेपालीको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी पाक्ने कुराले उनी चिन्तित छन्।